Dalxiiska Australia - Waxkasta oo aad arki karto ama sameyn karto | Safarka Absolut
Ustaraaliya waa wadan ku yaal Oceania oo isku dara labada sixir ee geesaheeda qaab xeebeed, iyo dhaqan kala duwan oo mudan in la baadho. Marka noocyada dalxiisyadu aad bay u ballaadhan yihiin. Mar alla markii aan dul istaagno dhulkeeda, waa inaan tagnaa Sydney Opera House, oo ah shaqo farshaxan oo dhan oo loogu talagalay bandhigyo. Sidoo kale Sydney waxaan ka helnaa Buundada Harbor, iyo sidoo kale dekeddeeda, St. Mary's Cathedral iyo xeebteeda.
Haddii aan aadno Melbourne ma seegi karno maktabaddeeda, iyo sidoo kale Beerteeda Botanical ama suuqa Queen Victoria. Marka lagu daro labadaas la soo sheegay, waxaa jira magaalooyin badan oo aanaan iloobi karin safarkayaga, sida Brisbane, Adelaide, Perth ama Gold Coast, iyo kuwo kale.
Dabcan, marka lagu daro magaalooyinka iyo soo jiidashadooda oo dhan, ma ilaabi karno aagga jardiinada oo Australia si wanaagsan ayaa loogu adeegay. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa Nambung National Park ama Purnululu iyo Karijini. Laakiin waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah kuwa loogu hadalheynta badan yahay had iyo jeer Beerta 12ka Rasuul. Marka lagu daro biyo-mareennada Wallaman ama jasiiradeeda iyo Barrier Reef. Xagee doorbideysaa inaad ka bilowdo wadadaada?
Hindisaha sayniska iyo farsamada Australiya
by Luis Martinez samee Bilaha 2 .
Ma jiraan wax badan oo ikhtiraaca cilmiga iyo farsamada Australiyaanka ah sida kuwa laga helay dalal kale oo adduunka ah. Sababta ayaa fudud: ...
Maxay yihiin shirkadaha ugu waaweyn Australia?
Maxay yihiin shirkadaha ugu waaweyn Australia? Su'aashani waa dhif iyo naadir marka laga reebo wareegyada dhaqaalaha ee gaarka ah. Daar…
Ogaanshaha sida Australiyaanku isu salaamaan
by Isabella samee Bilaha 2 .
Haddii fasaxaaga xiga aad rabto inaad safar ugu baxdo Australia ama aad rabto inaad waxbarasho u aado dalkan, ...
by Luis Martinez samee Bilaha 3 .
Deegaanka Australia waa mid aad u kala duwan oo aad u hodan ah. Maskaxda ku hay inaan ka hadlayno waddan weyn ...
by Daniel samee Bilaha 4 .
Sannad kasta kumanaan dalxiisayaal ah ayaa soo booqda Australia si ay u ogaadaan jasiiradda-qaaradda oo ay ugu raaxaystaan ​​qaab nololeedka Australiya. Iyo in…
Red Dog, eey magaalo halyeey ah
by Daniel samee Bilaha 8 .
Red Dog wuxuu noqday mid ka mid ah eeyaha ugu caansan adduunka sababtoo ah filimka «Red Dog,…
Faunada Australia waa mid gaar ah
Mid ka mid ah sababaha badan ee Australia uga dhigaya dal xiisa badan ayaa ah hodannimadeeda dabiiciga. Fauna ...
Ciyaartooydii tennis-ka Australia caanka ahaa
by Luis Martinez samee Bilaha 8 .
Ciyaartoyda tennis-ka ee ugu caansan Australia waxay dalkooda ka dhigteen awood weyn oo dhanka ciyaaraha ah. La aan…
Xeebaha ugu fiican adduunka
by Lugaha Alberto samee 2 sano .
Ku tiirsanaanta geedaha qumbaha, biyaha buluuga ah, iyo bacaadka dahabka ah. Sawirka saxda ah ee aan ku sawireyno fantasiyaheena socdaalka ah ee noqon kara ...
Taallada ugu muhiimsan adduunka
Wadamo badan ayaa leh taajkaas ama dhaxalkaas oo u matalaya adduunka. Mid la mid ah oo kumanaan u horseedda ...
Meelaha ugufiican ee la booqdo
by Lugaha Alberto samee 3 sano .
Imaatinka sanadka cusub, qaraaradu waxay bilaabayaan inay qulqulaan, inkasta oo aynaan dhamaanteen jeclaanaynin inaan joojino ...
8 xeebood oo adduunka ah oo dhalaala habeenkii
Dhagaxyada Rock Australia ee ugu Fiican
Australia iyo dhibaatada labiskeeda dhaqameed